ကျနော့်ရူပဗေဒဆရာမလေး | CeleTrend
July 27, 2020 CeleTrend Love Book 0
တစ်ရက်တော့ လမ်းမှာကျော့ကျော့မော့မော့စတိုင်နဲ့ စက်ဘီးလေးနင်းလာတဲ့ ဆရာမလေးနဲ့ မျက်နာချင်းဆိုင်ဆုံရောဆိုပါတော့။ ဖျတ်ကနဲမြင်တာနဲ့ ကျနော့်ကို ပြုံးပြလာတယ်။ ကျနော်လား? ချက်ချင်း မိုးပေါ်ကို မော့ကြည့်ပစ်လိုက်တာအဟိ ကောင်းကင်ထဲက မိုးတိမ်တွေကို စိတ်ဝင်စားနေတာလိုလို ဘာလိုလိုပေါ့လေ( မာနကြီးချက်များပြောပါတယ် ) ဟုတ်တယ်လေဗျာ။ သူပြောသလိုဆို ကျနော်က မိန်းမတကာကို အဖုတ်လိုက်လျှက်နေတဲ့ကောင်ဆိုတာကိုး။ ပတ်ကိုမပတ်သက်ချင်တော့ဘူး။ ရေလည်တင်းနေတာ။ နောက်တနေ့မှာ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကျူရှင်သွားအပ်ထားပေးတယ်ဆိုတဲ့ ဖိုးထွေးဆိုတဲ့ ချာတိတ်ရောက်လာတယ်။ ကိုဖိုးသက်! ဆရာမက ခဏလာခဲ့ပါတဲ့ ဆိုပီးလာခေါ်ရော။ ဟရောင် ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ကွာ ရီးမှမလာဘူးလို့ပြောလိုက်ဆိုပီး အော်လွှတ်လိုက်တယ်ဟိဟိ။ ညနေစောင်းတော့ ဒီကောင်ထပ်လာတယ်။ ကိုဖိုးသက် ဆရာမက ပြောတယ် ဆဲတာတော့ဘယ်ကောင်းမလဲတဲ့ အဲ့လိုတော့ မရိုင်းစိုင်းပါနဲ့တဲ့ ဆိုပီးလာပြောရော(တကယ့်ကောင်ဗျာ ရီးမှမလာဘူး ဆိုတာကို အတိကျ ပြန်သွားပြောသတဲ့ တကယ့်ကလေးဟားဟား) မင်းလည်း တကယ့်ကောင်ပဲကွာ ဆိုပီး ထိုင်ရယ်နေမိတယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ ဒီကောင်အဲ့လိုလာပြောနေတဲ့ အချိန် ဘေးမှာ ကိုရွှေဘရှိနေတယ်ဗျ။ ဘာတွေလဲကွ လုပ်စမ်းပါဦးဆိုပီး အင်တာဗျူးတော့တာပဲ။ ချာတိတ်ကို ပြန်လွှတ်လိုက်ပီး ဇာတ်စုံခင်းပြရတော့တာပေါ့ သူများအခန်းကိုကျော်ဝပြီး အဖုတ်လျှက်ပစ်ဖို့ကြံတဲ့ အကြောင်းလေး….။
ဆရာသမားက တဟီးဟီးနဲ့ရယ်တော့တာပဲ။ ချိုမေ ကငါတို့နဲ့ဆယ်တန်းတုံးကတူတူကွ အနေတည်သလောက် မာနက ခပ်ကြီးကြီးရယ် ယောကျာ်းတွေနဲ့လည်းခပ်ကင်းကင်းပဲဟ(ကျောင်းနေဖက်လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ မသာကြီး သူဖြင့်ဆယ်တန်းကို ၄ခါလောက်ကျတာကိုတော့ထည့်မပြောဘူး) သူ့ဖာသူဘာဖြစ်ဖြစ်လေ ကျနော့်ကိုပြောပုံက ကောင်းသလားဗျ ဟ! မင့်လုပ်ပုံကိုလည်းကြည့်ဦးလေ သူများအခန်းကိုကျော်ဝင်.. ဟိုကသနားလို့ ပြန်ကြိုက်မလိုလုပ်ရုံရှိသေး အဖုတ်လျှက်ပစ်ရတယ်လို့ .. ဟကောင် ဟိုကအရှက်အကြောက်ကြီးတဲ့ ဆရာမလေးကို မင့်လုပ်ပေါက်က ဟုတ်မှမဟုတ်တာပဲခွီး ကျနော်လည်း သူအပါအ၀င်၂ယောက်ပဲလျှက်ဖူးတာကို.. သူပြောသလို မိန်းမတကာလျှောက်လျှက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး ဟဲဟဲ.. ဒီမှာတင် အဖြေပေါ်နေပီလေ သူပြောတာလဲမမှားပါဘူး မင်းလည်းကောင်းတဲ့ကောင်မှမဟုတ်ပဲ ရှက်ရမ်းရမ်းမနေနဲ့ မအေဘေးလေး ဟီးဟီး မင့်လိုကလေက၀ကောင်ကို ဒီလောက်ထိလိုက်လျောတာတော်လှပီ.. လူကြီးလူကောင်းတွေလာကမ်းလှမ်းတာတောင် သူက အပျိုကြီးပဲလုပ်မှာဆိုပီး ငြင်းတာဆိုလား သောက်ကြီးသိပ်ကျယ်မနေနဲ့ ဟုတ်ပီလား ခေါ်နေတာ သွားတွေ့လိုက် အို! မသွားဘူး စပ်မြင်ကတ်တာကွာာာ မင့်ကိုမင်း ဇာတ်လိုက်မင်းသား မှတ်နေသလား သောက်ရူး မသွားလဲနေကွာလခွေးပဲ အဲ့ဒီလိုပဲ နေလာလိုက်တာ နောက်ထပ် ၃-၄ရက်လောက်နေတော့ ဇာတ်လမ်းထဲရေးခဲ့တဲ့ အတိုင်းပဲ ဟိုချာတိတ်လေးဖိုးထွေးက ဂွင်ဆင်လာပြန်တယ်။ ကိုဖိုးသက် ရေစက် ပျက်နေလို့ လိုက်ပြင်ပေးပါတဲ့။ မင့်အိမ်ကရေစက်လားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး ကျနော့်အသိအိမ်ကတဲ့။ ကျနော်သိတာပေါ့ဗျာ။ ဘာဆိုတာဟဲဟဲ။ ဒါပေမယ့် ခပ်တည်တည်ရှုတင်းတင်းနဲ့ ဂွအိတ်ကလေးဆွဲပီး လိုက်သွားလိုက်တယ်။ ဒေါ်ခင်ချိုမေ့ အိမ်ရှေ့ရောက်မှ ဟရောင်.. မင့်ဟာက ဘာလဲကွဆိုပီး ဟောက်လိုက်သေးတာ။ ဆရာမက အမှန်တိုင်းမပြောပဲ ခေါ်ခဲ့ဆိုလို့ပါဗျာ ကျနော်လည်း ခင်ဗျားတို့ကြားထဲမှာ စိတ်ညစ်လာပီဆိုပီး ခေါင်းကုတ်ဖင်ကုတ်ဖြစ်နေရှာတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ကျစ်ဆံမြီးအရှည်ကြီးတရမ်းရမ်းနဲ့ ဆရာမလေးပြေးထွက်လာတယ်။ စက်ဆရာပါလာပီကိုး ကဲ သားဖိုးထွေးကျောင်းသွားတော့ဆိုပီး ဟိုချာတိတ်ကို နင်လွှတ်လိုက်ကော။ ဟိုကောင်လည်းဒိုးသွားကော.. မချိုမချဉ်ဆရာမလေးက စက်ဆရာလေး ခြံထဲကြွပါရှင့်တဲ့။ ကျနော်လည်း ခပ်တည်တည်နဲ့ ခြံထဲလိုက်သွားတယ်(မျက်နာက ခပ်မာမာပဲဟဲဟဲ) ရေတွင်းဘေးက ရေစုပ်ပန့် လေမလုံတာကို ထိုင်ပြင်နေတာကိုဘေးကနေ ထိုင်ကြည့်ရင်း မထိတထိတွေလာပြောနေတာဗျ။ အသံလွင်လွင်လေးနဲ့ အူမြူးနေတာ ကျနော့်မှာ အံ့သြလို့။ မျက်နာတင်းတင်းနဲ့ အပျိုကြီးပေါက်စဆရာမလေးက မြီးကောင်ပေါက်မလေးလိုလုပ်နေတာကိုး။ ကျနော်လာမှာမို့လို့လားမသိဘူး ရေမိုးချိုး သနပ်ခါးပါးကွက်ကလေးနဲ့ မွှေးမွှေးပျံ့ပျံ့လှတပတလေးနဲ့ ချစ်စရာလေးဖြစ်အောင်စတိုင်ကထုတ်ထားသေးတာ။ အမှန်တိုင်းပြောရရင် လူက စိတ်ကိုလှုပ်ရှားနေပေမယ့်လို့ ဟန်ကိုယ့်ဖို့ဆိုတာလို မျက်နာကိုတင်းထားပီး သေချာကို မကြည့်ပဲ မျက်နာလွှဲပီး လုပ်စရာရှိတာလုပ်နေလိုက်တယ်။ ရေစက်လည်းကောင်းသွားကော ဟာ.. ရေလာပီ တော်လိုက်တာနော် ဘာညာနဲ့ လာ ပလူးနေသေးတယ်။ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပီး ဂွတွေသိမ်းပီး ထပြန်ဖို့လုပ်တော့ စက်ပြင်ခ ဘယ်လောက်ကျတုံးတဲ့။ ကျုပ်က ပက်ဆံနဲ့ပြင်စားတာမဟုတ်ဘူးဗျလို့ခပ်တင်းတင်းပြန်ပြောလိုက်တယ်။ သြော်! ဟုတ်သားပဲ အပျော်စက်ပြင်တာ.. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖဲသမားဆိုတာမေ့နေတယ်တဲ့။ ငါ့ကိုလာရိပြန်ပီဆိုပီး စိတ်ကတိုတိုနဲ့ လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုးပီး ရန်ထောင်မလို့ ခင်ဗျား!!! ဆိုပီးပြောလိုက်ကာရှိသေး ထိုးထားတဲ့ ကျနော့်လက်ညှိုးကို အတင်းဖမ်းဆုပ်ပီး သူ့နှုတ်ခမ်းပေါ်လက်ညှိုးလေး တင်ပီး ရှူးးး တဲ့ (မျက်လုံးလေးပါပြူးပြလာတာ ကျနော်လည်း ချစ်ရာမျက်နာပေးလေးမြင်ရတော့ ဆက်မအော်ပဲ ရပ်သွားတယ်) ပီးတာနဲ့ ကျနော့် လက်ကိုဆွဲပီး မီးဖိုခန်းထဲခေါ်သွားတယ်။ ငှက်ပျောထောပတ်ကြော်နဲ့ ကော်ဖီတွေပြင်ထားတာကျွေးတယ်။ ရေလည်စားကောင်းတယ်ဗျာ။ ကျနော်ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ အားရပါးရစားနေတာကို ပြုံးပီးရပ်ကြည့်နေတယ်။
ပလုတ်ပလောင်းနဲ့စားပီးတာနဲ့ ကော်ဖီမွှေးမွှေးလေးမော့ရင်း ကျနော်လည်း ပြန်ပြုံးပြလိုက်မိတော့ စကားစလာတယ်။ စားလို့ကောင်းလား ကိုဖိုးသက်လေး အရမ်းကောင်းတယ်ဗျ နောက်ကော စားချင်သေးလား ၀သွားပါပီ ဗိုက်ကိုအင့်နေတာပဲ ဟင့်အင်း! ချိုပြောတာ နောင်တသက်လုံး ခုလိုလုပ်ကျွေးတာမျိုးစားချင်လားလို့မေးနေတာ(ပြောရင်း အောက်နှုတ်ခမ်းကိုတင်းတင်းကိုက်ပီး မချင့်မရဲဟန်လေးဖြစ်နေပြန်တယ်) ဟုတ်! ကိုဖိုးသက်လေးကို ရှင်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့မိန်းမက မဆိုးမမိုက်ရဘူးလို့ပြောရင် လိမ္မာပီး ပြောစကားနားထောင်မှာလား ထောင်မှာပေါ့ဗျာ (ကျနော် ရင်တွေခုန်လာတာ အရမ်းပဲဗျာ) ဂတိပေးရဲလား ကဲ! အို ဘာလို့မပေးရဲရမှာလဲ ပေးတယ်ဗျာ ဒါဆို ကိုဖိုးသက်လေးကို ချို..ချို ချစ်တယ်… တဲ့ အဲ့လိုလည်းကြားကော ထမင်းစားပွဲမှာ ထိုင်ပီးကော်ဖီမော့နေရာကနေ ကျနော် ဆတ်ကနဲထရပ်၊ မတ်တပ်ရပ်လျှက်လက်ကလေးပိုက်နေတဲ့ ဆရာမလေးကို အားရပါးရဆွဲဖက်ပစ်လိုက်တော့တာပဲ။
ကျစ်ဆံမြီးအရှည်ကြီးနဲ့ ပါးကွက်ကြား ဆရာမချောချောလေး ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲမှာ မြုပ်သွားတဲ့အထိအတင်းဖက်ပစ်လိုက်တာပေါ့။ ပျော်ထှာဗျာ။ အမလေး အဲ့ဒီတော့မှ ကိုဖိုးသက်လေး မကောင်းဘူးသိလား ချို့ကို ချစ်တယ်လို့လည်းပြောသေး ပစ်ပြေးသွားတယ်။ ချိုဘယ်လောက်ဝမ်းနည်းခဲ့ရလဲ ရှင်လေးသိလား ဆိုပီး ကျနော့်ရင်ဘတ်ပေါ်မျက်နာအပ်ပီးငိုပါလေရောလားဆရာတို့ရယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း တသိမ့်သိမ့်တုန်နေတာပဲ။ ရေလည်ဝမ်းနည်းနေရှာတာဟီဟိ။ အီဖေကိုယ်ကလည်း.. ဆောရီးပါဆရာမလေးရာ ကျနော်စိတ်တိုလို့သာရှောင်နေရတာ ရင်ထဲမှာတော့ ဘာပြုပါတယ်ညာပြုပါတယ်ပေါ့။ ကိုင်း! တိတ်တော့ ပါးကွက်တွေပျက်ကုန်ပါပီ ငါ့ဆရာမလေးက ကလေးပေါက်စလေးကျနေတာပဲ ဘာညာနဲ့ ပါးပြင်ပေါ်က မျက်ရည်တွေကို ကျနော်ပါးနဲ့ပွတ်ပီး သုတ်ပေးပစ်လိုက်တယ်။ မျက်လုံးလေးမှိတ်ပီးငြိမ်ခံနေရှာတဲ့ မျက်နာဖူးဖူးလေးကို လက်ဖ၀ါး၂ဖက်နဲ့ညှပ်ထားရင်း တဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းရဲရဲလေးကိုပါ ပလွတ်ကနဲစုပ်နမ်းပစ်လိုက်တယ်။ ခြေဖျားထောက် ခါးလေးကော့ပေးလာတော့ ခါးကျင်ကျင်လေးကိုပါ သိုင်းဖက် ကျောပြင်လေးကိုပါပွတ်ပေးနေမိတာပေါ့။ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ခြံနဲ့ဝန်းနဲ့ ဆိုတော့ လေအဝှေ့မှာ သစ်ပင်တွေဆီက သစ်ရွက်တွေလေတိုးတဲ့ အသံ တရှဲရှဲကလွှဲပီး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတော့ လုံးဝရိုမန့်တစ်ပဲ။ ဒန်ဒန့်ဒန် ပေါ့ဗျာဟီဟိ။
မီးဖိုချောင်ထဲမှာ အချစ်နလံထနေကြတဲ့ ရူပဗေဒဆရာမလေးနဲ့ သူချစ်တဲ့ကောင်ဆိုးလေးဖိုးသက်(ပြောရတာအရသာရှိလိုက်ထှာဟိ) အပေါ်ပို့စ်မှာရေးခဲ့တဲ့အခြေနေအတိုင်းဆို ရေလည်ရိုမန့်တစ်နေကြပီဆိုတော့ တွယ်များတွယ်ကြတော့မလားလို့ခင်ဗျားတို့တွေးမိပီး မျှော်နေကြမယ်နဲ့တူတယ်။ တကယ်တမ်းက မတွယ်ဖြစ်ဘူးဗျ(ဟာ.. ဒင့်မေဂလွှား အဟုတ်မှတ်ပီးစောင့်ဖတ်နေတာ မအေဘေးချိုကန်း) ဒါကအော ဇာတ်လမ်းရေးနေတာမှ မဟုတ်တာညီအကိုတို့ရာ။ ချစ်ကိုယ်တွေ့ပါဆိုနေမှပဲဟီးဟီး။ ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ သူ့အခန်းထဲကျော်ဝင်ပီး အဖုတ်လျှက်ပစ်ခဲ့တာကတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုမှ အချစ်ဇာတ်လမ်းကစရတာကိုးဗျ။ တကယ်တမ်းပြောရရင် ဘာမှတောင်မဘာရသေးဘူး။ ဘယ်လိုလုပ် အုပ်တဲ့အဆင့်ထိရောက်မှာတုံးလို့။ ခင်ဗျားတို့လို သူလိုငါလို သမီးရည်းစားစဖြစ်ကြတဲ့ အခြေနေလိုပါပဲ။ ပွေ့ဖက်ထားပီး ကတုန်ကယင်တွေဖြစ်နေခဲ့ကြတာနဲ့တင် လူက ကျေနပ်နေပီလေ။ နမ်းတာတော့နမ်းတာပေါ့။ ကိုယ်လုံးအိအိလေးကို အတင်းပွေ့ဖက်တာ၊ နဖူးပြောင် တင်းတင်းလေးကို ပါးနဲ့ပွတ်တာ၊ ကျနော့်ရင်ဘတ်ကို ဆရာမလေးက အမြတ်တနိုးတရွှတ်ရွှတ်နဲ့နမ်းတာလောက်နဲ့တင် ကျေနပ်နေကြတာပေါ့။ လက်ဖ၀ါးချင်းကပ်ထားပီး ဆုပ်နယ်ကြ၊ သူ့လက်မောင်းအိုးဖြူအိအိလေးတွေကို စိတ်ယားနေတဲ့ ကျနော်က ဆွဲဆွဲပီးဆတ်ကနဲကိုက်၊ သူကလန့် ပီး အော်၊ ကျမရဲ့ ကိုဖိုးသက်လေးကပြုံးလိုက်ရင် ချစ်စရာလေးရှင် လို့ခပ်တိုးတိုးရှက်ဝဲ၀ဲလေးပြောရင်း(သည်းခံကြပါခင်ညာ) ကျနော့်ပါး၂ဖက်ကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်မွှေး(ကျနော့်နှုတ်ခမ်းကို သူမနမ်းရဲဘူးဗျ ရှက်နေပုံရတယ်)၊ ကျနော်ကလည်း ပွဲဈေးမှာ မိုးပျံပူပေါင်းဝယ်ပေးဖို့ပူဆာတာရ လာတဲ့ ကလေးပေါက်စလေးလို အဟိအဟိနဲ့ပြုံးပျော်နေတာပေါ့ဗျာ။
ဒါနဲ့ပဲ ကျောင်းဆင်းချိန်ရောက်လာတော့ သူ့တပည့်မလေးတွေပြန်လာခါနီးပီမို့ မခွဲချင်ခွဲချင်နဲ့ ကိုဖိုးသက်လေး ပြန်တော့နော် ဆိုပီးပြောလာရော။ ပြောတာပြောနေတာ ကျနော့်ရင်ခွင်ကျယ်ကြီးထဲပါးလေးအပ်ပီး အတင်း ဖက်ထားတာကိုတော့ မလွှတ်ဘူးရယ်။ ပြန်ချင်ဘူးဆရာမလေးရာလို့ စူပုပ်ပုပ်မျက်နာနဲ့ပြောလိုက်တော့ လိမ္မာပါတယ်ကွာ ချိုလည်း ဘယ်ပြန်လွှတ်ချင်ပါ့မလဲ ခဏနေရင်တပည့်မတွေပြန်လာတော့မှာဟ ဆိုပီး မျက်နာလေးက ခပ်ပျက်ပျက်ဖြစ်သွားရှာတယ်။ ဒါဆိုလည်းပီးကောဗျာ လို့ပြော ရင်း ဆရာမလေးရဲ့ ခါးကျင်ကျင်လေးကို ခပ်တင်းတင်းဖက်ရင်း နှုတ်ခမ်းနီရဲရဲလေးကို အားရပါးရ စုပ်ပီးနမ်းပစ်လိုက်တာ အကြာကြီးပဲ အားရသွားမှ နှုတ်ခမ်းချင်းဆက်ထားတာလွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ မောလိုက်တာ ကိုဖိုးသက်လေးရာ ချို ဒူးတွေမခိုင်တော့ဘူး ရှင်လေးတော်တော်ဆိုးလို့ ပြောရင်း ရင်ဘတ်ကိုမနာအောင်ထုလာတယ်။ အဲ့ဒီရှက်ဝဲ၀ဲရင်ဖိုနေတဲ့ ဆရာမလေးရဲ့ မျက်နာပေးလေးကို ခုထိတောင်မြင်ယောင်နေမိပါသေးတယ်ဗျာ။ ဒါနဲ့ပဲ ပြုံးပျော်နေတဲ့ ကျနော်အိမ်ဘယ်လိုပြန်ရောက်လာမှန်းတောင်မသိပါဘူး။ မယုံနိုင်စရာအခြေနေကြီးကိုးဗျ။
တစ်မြို့လုံးသိတဲ့ မျက်နာထားတင်းတင်း ရူပေဗေဒဆရာမချောချောတောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်လေးက ကိုယ့်ရည်းစားဖြစ်နေပီလေ။ ငါ့လခွေး ချမ်းကိုရာ မင့်ဟာကြီးက ဇာတ်မျှောကြီး ဘာမှလဲ မပါ ပါလားလို့ကလော်ဆဲချင်နေကြပီလားညီအကိုတို့။ လာမယ်လေဗျာ။ ဇာတ်ကြမ်းတွေလာတော့မှာ ခဏစောင့်။ နောက်ရက်တွေမှာ နေ့လည်တစ်နာရီကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်းသံကိုပဲနားစွင့်နေတော့တာဗျ။ ဆရာမလေးရဲ့အိမ်က ကျောင်းသူတွေနေ့လည်စာထမင်းပြန်စားပီး ကျောင်းပြန်သွားတဲ့အချိန်လေ။ နေ့လည်တစ်နာရီထိုးတာနဲ့ အီဖေကိုယ် တို့က လှစ်ကနဲပျောက်သွားတော့တာပဲ။ ဆရာမလေးအိမ်ကိုပြေးတာလေ။ သုံးနာရီဆယ့်ငါ့း ကျောင်းဆင်းချိန်အထိ အဲ့ဒီမှာသွားပီး ရင်ဖိုစရာသမီးရည်းစားသဘာဝ အတို့အဆိတ်လေးတွေသွားသွားလုပ်နေတော့တာပေါ့။ ပထမပိုင်းရက်တွေမှာတော့ ဖက်တာနမ်းတာလောက်နဲ့တင်ပွဲကပီးပီးသွားတယ်ဗျ။ ရှေ့ဆက်ပီး မတိုးရဲသေးဘူး။ ဟိုအဖုတ်လျှက်လိုက်ကထဲက ကိုယ့်ကိုပြောထားတာဆိုတော့လန့်နေတာကိုးအဟိ။ နေ့လည်နေ့ခင်း သူလုပ်ကျွေးတဲ့ သွားရည်စာမုန့်လေးတွေစား၊ကော်ဖီသောက် ပွေ့လိုက်ဖက်လိုက်လုပ်နဲ့တင်သက်ပြင်းတွေချချပီးပြန်လာရတာချည်းပဲ။ ဂွေးတော့နည်းနည်းအောင့်တောင့် တောင့်ပေါ့လေဟီး။ ဒီလိုနဲ့တစ်ရက်သား ကျနော်ရောက်သွားတဲ့အချိန် ဆရာမလေး ရေမိုးချိုးအ၀တ်တွေလျှော်ပီး ခြံထဲက ကြိုးတန်းမှာ လှန်းနေတဲ့အချိန်ဗျ။ သိတဲ့အတိုင်း ထမီရင်ခေါင်းလျားလေးနဲ့ ရေတွေက စိုထားတော့ကာ ကိုယ်လုံးကတင်းတင်းရင်းရင်းလေး၊ ဒီကကောင်ရေလည် ဖီးလ်ဖြစ်လာတာပေါ့။ မီးတောက်တော့မတတ်မျက်လုံးတွေနဲ့ထိုင်ကြည့်နေတာဟီး။ သူလည်းရိပ်မိပုံရတယ်ဗျ။ ကျနော်ခေါ်တောတစ်ထောင်အားနဲ့ စိုက်စိုက်ကြည့်နေတာကို မျက်လွှာလေးချ အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကိုက်ပြရင်း ကိုဖိုးသက်လေးနော် ကိုဖိုးသက်လေးနော်နဲ့ အော်အော်ငေါက်နေတာဟီဟိ။ မထူးတော့ဘူးဆိုပီး ဥာဏ်ဆင် တော့တာပေါ့။
ဆရာမလေး ကျနော့်ကို ကော်ဖီဖျော်တိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တော့ ခဏလေးကွာ ရေချိုးပီးစထမီရင်ခေါင်းလျားမို့ အိမ်ပေါ်တက်ပီးအ၀တ်လဲဦးမယ် စောင့်ဦးတဲ့။ ဟင့်အင်း ခုဖျော်တိုက် အရမ်းဆာနေပီလို့။ ဟွန်း! ဆိုပီး အ၀တ်ဇလုံအလွှတ်ကလေးကိုင်ပီး မီးဖိုချောင်ထဲဝင်သွားရော။ အနောက်ကနေအသာလေး လိုက်သွားတဲ့ ကျနော်ကတော့ ထမီရေစိုအောက်က လှုပ်လီလှုပ်လှဲ့ တင်ပါးအိစက်စက်ထွားထွားကြီးကိုကြည့်ပီး ဂလုဂလုပေါ့။ မီးဖိုခန်းထဲရောက်သွားကြတော့ ကော်ဖီနှပ်ဖို့ ပြင်နေတဲ့ ထမီရင်ခေါင်းလျား ဆံပင်ဘီးဆံပတ်ကြီးနဲ့ ဆရာမချောချောလေးကို အသာလေးအနောက်ကနေပြေးဖက်လိုက်တယ်။ ဟာကွာ! လို့ တစ်ခွန်းပဲအော်နိုင်တယ် တစ်ကိုယ်လုံးတွန့်တက်သွားရော။ အောက်ကမာန်ဖီနေတဲ့ ကျနော့်ဒုံးပျံနဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် အနောက်ကနေ တင်ပါးကိုထောက်လိုက်တာကိုး။ အော်တာအော်တယ် တွန်းတာတွေရုန်းတာတွေမလုပ်ဘူးဗျ။ အနောက်ကနေ အဲ့လို အထောက်ခံထားရတဲ့အပြင် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ကွာဆိုပီး ဂျိုင်းအောက်ကနေ လက်၂ဖက်နဲ့လျှို တစ်ခါမှမထိဖူးမကိုင်ဖူးသေးတဲ့ ချိုဗူး၂လုံးကိုပါ ထမီရင်ခေါင်းလျားပေါ်ကနေ အုပ်ကိုင်ပစ်လိုက်တယ်။ ဘီးဆံပတ်ထုံးထားလို့ပြောင်ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်နေတဲ့ လည်တိုင်ကျော့ကျော့ဖြူဝင်းဝင်းလေးကိုပါ နှုတ်ခမ်းနဲ့ရွရွလေးတွေလျှောက်ဖိနမ်းပစ်လိုက်တော့ အသက်ရှူသံတွေပြင်းလာရော။ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲ မျက်နာချင်းဆိုင်ဖြစ်သွားအောင် ဆရာမလေးရဲ့ ကိုယ်လုံးကို ဆွဲလှည့်ပစ်လိုက်တော့ တဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့အောက်နှုတ်ခမ်းကို သွားနဲ့အတင်းဖိကိုက်ထားတဲ့ ရီဝေေ၀မျက်နာချောချောလေး။ နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်ပစ်လိုက်တယ်။
ဒူးကိုနည်းနည်းကွေးပီး (ကျနော်ကပုဆိုးဝတ်ထားတာဆိုတော့ ဒုံးပျံက အတော်ထောင်ထွက်နေတာ) အဖုတ်နေရာလောက်ကိုစိတ်မှန်းနဲ့မှန်းပီး ကပ်ဆောင့်လေးဆောင့်ထိုးပေးနေလိုက်တယ်။ လက်၂ဖက်ကလည်း လုံးဝ မထိဖူးသေးတဲ့ ရေစိုထမီအောက်က တင်ပါးဝိုင်းဝိုင်းအိအိကြီးတွေကို စုံကိုင်ပီးအတင်းဆုပ်ချေနေတာပေါ့။ အသက်ရှူသံတွေပြင်းချက်ကဗျာ။ ရှူးရှူးရှဲရှဲကိုဖြစ်နေကြတာ။ အဲ့လိုပွဲကြမ်းနေရင်း လက်မြန်ခြေမြန်နဲ့ သူ့ထမီရင်ခေါင်းလျားကိုဆတ်ကနဲ ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ပြေကျသွားတဲ့ ထမီကို အတင်းဆွဲတင်ဖို့လုပ်ပေမယ့် ကျနော်က အတင်းဆွဲချပစ်လိုက်တာ ခါးနားအထိရောက်သွားရော။ အဲ့ဒီတော့မှ ဒေါ်ခင်ချိုမေရဲ့ အချစ်ဗူးကြီး၂လုံးကိုသေချာမြင်ဖူးတော့တာဆရာတို့ရေ။ နည်းတာကြီးတွေလားဗျာ။ ထွားလိုက်တာ။ တင်းရင်းပီး ၀ိုင်းစက်ချက်။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေ ကပုစိကွေးလေးတွေ။ ၀ါဝင်းစိုပြေချက်ကလည်း နေမထိလေမထိ ဘော်လီအင်းကျီအောက်က သိမ်းထုပ်ထားတာတွေဆိုတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ လူကို မှင်တက်သွားတာဖူးးး။ လက်ဖ၀ါး၂ဖက်နဲ့အုပ်ပီး လှမ်းကိုင်လိုက်တာတောင် လက်မဆန့်ဘူးဗျ။ တုန်တုန်ရီရီနဲ့ ကိုင်ကြည့်ရင်း သာသာဖွဖွလေး ဆုပ်နယ်ပေးလိုက်တာ အဟင်းးး ဆိုပီး မျက်လုံးစုံမှိတ်ပီးငြီးသွားတယ်။ နို့သီးခေါင်းသေးသေးလေးတွေကို လှိမ့်ပီးချေပေးတော့ တုန်တုန်တက်သွားရော။ လူလည်းဘယ်လိုမှမအောင့်နိုင်တော့ဘူး။ တစ်ဖက်က ချိုဗူးတစ်လုံးကို အားရပါးရအုပ်ကိုင်ထားရင်း ကျန်တဲ့ ချိုဗူးတစ်လုံးကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ နို့ဆာနေတဲ့ကလေးလို အသေစို့ပစ်တာပေါ့။
ဆရာမလေးဆီက ကိုဖိုးသက်လေး.. ရှင် ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ ကိုဖိုးသက်လေး မကောင်းဘူးကွာ.. အိုကွာ.. အဲ့လို ငြူစူတဲ့ အသံလေးတွေကြားနေရပေမယ့် ဂရုကိုမစိုက်တော့တာလေ။ ဘယ်ညာပြောင်းပီးကို ချိုစို့ပစ်လိုက်တယ်။ အားရပါးရစို့နေရင်း ခါးအထိလျှောကျနေတဲ့ထမီ (သူ့လက်တစ်ဖက်က ပြေနေတဲ့ ထမီကိုကိုင်ထား ရင်း ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်က ကျနော့်ဆံပင်တွေကို တင်းတင်းဆုပ်ထားတာ) အောက်ကိုလျှိုပီး ဟိုတခါက လျှက်ထားဖူးတဲ့ ဖုတ်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းဆီကို လက်နဲ့လှမ်းနှိုက်လိုက်တော့ အရည်ချွဲပျစ်ပျစ်တွေစီးကျနေမှန်းသိလိုက်ရတယ်။ အဖုတ်ကို တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ပဲ ပွတ်ပေးရသေးတယ် အတင်းတွန်းလွှတ်ကော။ အဲ့ဒါနဲ့ လူချင်းခွါလိုက်ပီး ဘာလဲဗျာ? ကျနော်မနေနိုင်တော့ဘူး ဆရာမလေးကို အသားကုန်ချစ်ချင်နေပီဗျာ လို့ ဆူဆောင့်ဆောင့်လေးပြောလိုက်တော့ ခါးရောက်နေတဲ့ ထမီကို ရင်ခေါင်းပြန်လျားလိုက်ရင်း မချိုမချဉ်မျက်နာပေးနဲ့ ရှင့်ကို မချစ်ရဘူးလို့ ဘယ်သူပြောလဲ.. ဒါပေမယ့် ဒီ မီးဖိုခန်းမှာတော့ မဟုတ်ဘူး ချို့အခန်းထဲမှာ.. တစ်မိနစ် အချိန်ပေးမယ် ဒါပဲ.. လို့ပြောရင်း လှစ်ကနဲထွက်ပြေးသွားတယ်ဗျ။
ပုဆိုးအောက်က ဒုံးပျံကြီးငေါက်တောက်နဲ့ အူကြောင်ကြောင်ငေးရင်းကျန်ခဲ့တဲ့ ကျနော်လည်းအဲ့ဒီတော့မှသတိဝင်လာတယ်။ သိတဲ့အတိုင်းပဲ လူက လိင်စိတ်တက်လာပီဆို ရင်တွေပူ အာခေါင်တွေခြောက်တတ်တာမလား။ မီးဖိုခန်းထဲက ရေအိုးစင်မှာ ရေတစ်ခွက်ခပ်သောက်ပီး အသာလေး အိမ်ပေါ်ထပ်ကိုတက်သွားလိုက်တယ်။ ငါတော့ ငါ့ချစ်ချစ်ဆရာမအပျိုကြီးလေးကို တွယ်ရတော့မှာပါလားဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ရင်ခုန်သံတွေကိုမြန်လို့ဆိုပါတော့ဗျာ။ အိမ်အပေါ်ထပ်က ဆရာမလေးအခန်းရှေ့ရောက်သွားတော့ တံခါးပိတ်ထားတယ်ဗျ။ အသာလေးတွန်းလိုက်တော့ ကျွိကနဲပွင့်သွားတယ်။ အထဲမှာ ဘယ်သူမှလဲရှိမနေဘူးရယ်။ အဲ့ဒီမှာဗျာ အခန်းထောင့် အ၀တ်ဖြူအုပ်ထားတဲ့ဆင်းဂါး အပ်ချုပ်စက်ကြီးက အလိုလို ဘီးလုံးလှည့်သွားတာတွေ့လိုက်တော့ ပြုံးပီး အသာလေးအခန်းတံခါးကို ချက်ထိုးလိုက်တယ်။ ချက်ထိုးပီးမှ အပ်ချုပ်စက်နားကပ်သွားပီး အုပ်ထားတဲ့ အ၀တ်စ ကို ဆတ်ကနဲဆွဲဖက်လိုက်တော့ အပ်ချုပ်စက်အောက်က ခြေနင်းခုံပေါ် လေးဖက်လေးထောက်ပီး ၀င်ပုန်းနေတဲ့ ဆရာမလေးကိုဘွားကနဲတွေ့လိုက်ရတယ်အဟီး။ ဘီးဆံပတ်ထုံးထားတာပြေကျလို့ဆံပင်ရှည်ကြီးတွေက ကပိုကရိုနဲ့၊ ထမီရင်ခေါင်းလျား လေးနဲ့ မျက်လုံးလေးပြူးပီး ပုန်းနေတဲ့ ချစ်စရာအပျိုကြီးလေး။ အဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာလဲ ဆရာမလေး.. ခုထွက်ခဲ့ ဆိုတော့ ဟင့်အင်း! ချို ကြောက်တယ် သူများကို ဘာလုပ်တော့မှာလဲ မသိဘူး မလာဘူးတဲ့ဟားဟား။ ၁၆နှစ်သမီး အကြောက်ပိုနေတဲ့ဟန်ပန်ကလေးဗျာ။ အသာလေးငုံ့ပီး ပုခုံး၂ဖက်ကိုစုံကိုင်ပီး ဆွဲထုတ်တာတော့ အပ်ချုပ်စက် ခြေနင်းခုံကို အတင်းကိုင်ထားပီး တင်းခံနေသေးတယ် တကယ့်ဟာသ။ နောက်ဆုံးအားချင်းမမျှတော့မှ ကျနော့်လက်ထဲပါလာတော့တာ။ ဆွဲထူမပီးတာနဲ့ ကုတင်ပေါ်ကိုပွေ့ခေါ်သွားပီး ကုတင်စောင်းပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်။
ကျနော့်ကို မကြည့်ရဲလို့လားမသိဘူး ကုတင်စောင်းမှာ ခြေချထိုင်ရင်း ကြမ်းပြင်ပေါ် ရပ်နေတဲ့ ကျနော့်ကိုခါးကနေ အတင်းဖက်ထားတာမလွှတ်ဘူး။ ကျနော်လည်း ကျောပြင်လေးကိုပွတ်ပေးနေရင်း ထမီကိုပြန်ဖြေချ၊ ချိုဗူးတွေကို လက်ဆော့ပေးနေလိုက်တယ်။ ခုနက ခဏပြန်ပျော့သွားတဲ့ ဒုံးပျံက ပြန်မတ်လာပြန်ပီ။ ဒါနဲ့မထူးပါဘူးကွာဆိုပီး ဆရာမလေးနဲ့မျက်နာချင်းဆိုင်နေရာကနေ အသာလေးနောက်ဆုတ်ပီး ကျနော့်ပုဆိုးကိုချွတ်ချပစ်လိုက်တယ်။ ပုဆိုးတင်မကဘူး အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုပါ ချွတ်ပစ်လိုက်တာ။ အောက်က ဒုံးပျံက ဖြောင်းကနဲထွက်ကျလာပီး လေထဲမှာ တရမ်းရမ်းရယ်။ ဟာ!! ဆိုတဲ့ အာမေဋိတ်သံလေးနဲ့ ဆရာမလေးခမျာ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားရှာတယ်။ နီရဲရဲထိပ်ဖူးကြီးနဲ့ ဒုံးပျံကြီးကို မှင်တက်ပီး စိုက်ကြည့်နေတာ။ ခပ်တည်တည်ပဲ ကျနော်လည်း အပေါ်က ၀တ်လာတဲ့ အင်းကျီကိုပါ ချွတ်ပစ်လိုက်တော့ တစ်ကိုယ်လုံးတုံးလုံးပေါ့။
ဆံပင်ရှည်တွေဖရိုဖရဲဖြစ်နေတဲ့ တုံဏှိဘာဝေ ဖြစ်ပီး စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဆရာမလေးဆီကပ်သွားတယ်။အသာလေးကုတင်ပေါ်ပက်လက်ဖြစ်သွားအောင် တွန်းလှဲလိုက်ပီး ပြေကျနေတဲ့ ထမီကို အတင်းဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်ကော။ အဲ့ဒီတော့မှ ဟိုအရင်တစ်ခါက လျှက်ဖူးခဲ့ တဲ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးက အမွှေးပါးလျလျလေးအောက်မှာ ဘွားကနဲပဲ။ အရည်လေးတွေတောင်စို့နေတာ။ ပေါင်၂ချောင်းကို ဆွဲဖြဲလိုက်ပီး အရည်တွေစို့နေတဲ့ အပျိုကြီးပေါက်စလေးရဲ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းပေါ်ကို ကျနော့်ဒုံးပျံအချောင်းလိုက်တင်ပီး ၄-၅ချက်လောက်ပွတ်ပစ်လိုက်တော့ ရှူးရှူး ဆိုတဲ့ အသက်ရှူသံပြင်းပြင်းနဲ့အတူ ကျနော့်လက်မောင်း၂ဖက်ကို ဆရာမလေးအတင်း ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်လာတယ်။ လုံးဝတင်းနေပီဖြစ်တဲ့ ဒုံးပျံကို အရင်းကကိုင်ပီး အဖုတ်ဝမှာတေ့ထားလျှက်ကနေ ရှေ့ကိုဆတ်ကနဲတိုးလိုက်တာ ထိပ်ဖူးလေးမြုပ်ဝင်သွားတယ်။ အိအိနွေးနွေးအရသာလေးနဲ့အတူ ချွဲပျစ်ပျစ်ချောဆီတွေကြောင့် လျှောလျှောလျူလျူပဲ။ ထပ်ပီးထိုးထည့် တော့မှ မ၀င်တော့ပဲ ဒုံးပျံတစ်ချောင်းလုံး ကွေးတက်လာပီး ပလောက်ကနဲချော်ထွက်သွားတယ်။ ဆရာမလေးဆီက နာကျင်မှုတစ်ဝက် အားမလိုအားမရတစ်ဝက်ရောလျှက်နေတဲ့ အော်သံလေးကြားလိုက်ရတယ်။ အာ့!! ကိုဖိုးသက်လေးရာ … တဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ အီဖေကိုယ်တို့ ချွေးပြန်တဲ့အကွက်ဆိုက်တော့တာပါပဲလားဆရာတို့ရာ။ ရေလည်တိုင်ပတ်နေတော့တာဗျို့။ ထပ်ပီး ဆရာမလေးရဲ့ အဖုတ်ဝမှာတေ့တယ်။ ဖိသွင်းတယ်။ ရမ်ဘိုထိပ်ဖူးတော့မြုပ်တယ်။ အိကနဲပဲ။ အားနဲ့ထပ်ဖိထိုးထည့်လိုက်ရင် ဒုံးပျံတစ်ချောင်းလုံးကွေးကောက်သွားပီး ပလောက်!! ကနဲမြည်သံပေးပီး ချော်ချော်ထွက်ကုန်တာအဟီး။
ကျနော့်အပျိုကြီးဆရာမလေးခမျာ ကပိုကရိုဆံနွယ်ရှည်ကြီးတွေပြေကျနေတဲ့ကြားထဲက ကုတင်ပေါ်ပက်လက်လှန်အိပ်နေရာကနေ တံတောင်ဆစ်၂ဖက်ထောက်၊ အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို တင်းတင်းကိုက်ရင်း ခေါင်းထောင်ပီး အောက်က အဆီအငေါ်မတဲ့ အပေါက်အလမ်း မတည့်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကို အံကြိတ်ပီး ပန်းသွေးရောင်တောက်နေတဲ့ မျက်နာလေးနဲ့ လှမ်းလှမ်းကြည့်လာပီ။ ကျနော်လည်းကြိုးစားတာပဲဗျ။ မရဘူး။ ဒုံးပျံကို ချော်မထွက်သွားအောင် လက်နဲ့တင်းတင်းဆုပ်ပီး သေချာတေ့ပီးထိုးသွင်းတော့လဲ အမလေး နာလိုက်တာ ကိုဖိုးသက်လေး ရာ.. ဆိုတဲ့အော်သံလေးထွက်လာတာနဲ့ ထပ်မထိုးထည့်ပေးရက်တော့ပဲ ဆွဲထုတ်လိုက်ရပြန်တယ်။ နောက်တစ်ခါထပ်ထည့်ပြန်တော့လဲ ဒီတိုင်းပဲ.. နာလိုက်တာရှင်! ဆိုတဲ့အော်သံလေးကြားတာနဲ့ ဆက်မလုပ်ရဲပြန်ဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ စိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်ပီး ကိုယ်ပါ ကုတင်ပေါ် တက်ပီး ခြေပစ်လက်ပစ်ဝုန်းကနဲ သူ့ဘေးမှာ လှဲအိပ်လိုက်မိရော။ စဉ်းစားကြည့်ကြပါဗျာ။ ဒီလောက်ချောမောကျက်သရေရှိပီး တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် အပျိုကြီးပေါက်စ သန့်သန့်စင်စင်လေးကို စိတ်ရှိတိုင်း ချစ်ခွင့်ရနေကာမှ မအောင်မမြင်ဖြစ်နေတာကိုး။ သူကမလုပ်နဲ့လို့ တွန်းထိုး ငြင်းဆန်တာ တစ်ခုမှမလုပ်ဘူးနော်။
ဒါပေမယ့် ဘာလို့မှန်းကိုမသိဘူး သနားစဖွယ်လေး နာလိုက်တာကိုဖိုးသက်လေးရာ လို့အော်လာရင် မလုပ်ပေးရက်တော့တာမျိုးဗျာ။ ကျနော့်မှာသူနဲ့မတိုင်ခင်က မမတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးပီး အိပ်လည်းအိပ်ခဲ့ဖူးပီးပါပီ။ လိင်ကိစ္စမှာ မကျွမ်းကျင်ပေမယ့် လို့ အစိမ်းသက်သက်မှမဟုတ်တော့တာ။ ဒါပေမယ့် မသိဘူးဗျ ဒီရူပဗေဒဆရာမလေးကိုတော့ တစ်မျိုးပဲ။ မေတ္တာတရားက လိင်စိတ်ကို အနိုင်ယူယူနေတာလို့ပြောရမလားမသိဘူးရယ်။ (ဒီမအေဘေး ချိုကန်း ပလီပြန်ပီလို့ ဆဲချင်လည်းဆဲကြပါဗျာ) အတင်းကြီးဆက်မလုပ်ရက်ဘူး။ သနား တယ် အဲ့ဒါပါပဲ။ ဆရာမလေးရဲ့ဘေးမှာ လှဲအိပ်နေရင်းက မျက်နာလေးကိုဖုံးထားတဲ့ဆံနွယ်ရှည်တွေကို ဆွဲဖယ်ပီး ငေးကြည့်နေမိတယ်။ မချင့်မရဲဟန်လေးကနေ ကြင်နာ သနားစိတ်တွေယိုဖိတ်နေတဲ့ မျက်လုံးလေးတွေနဲ့ကျနော့်ကို ငေးနေတဲ့ဆရာမလေးရယ်လေ။ အ၀တ်မဲ့ဖြစ်နေတော့ ကာ အိစက်ထွားကျိုင်းလွန်းတဲ့ ချိုဗူးကြီး၂လုံးက ထင်းနေတာပဲဘေးတိုက်လှဲအိပ်ထားတာတောင် တအားတွဲကျမနေဘူး၊ခါးသိမ်သိမ်လေးအောက်မှာ ကားစွင့်တဲ့တင်ပါးကြီး ဖြူဖွေးနေတာပဲ၊ ချက်နက်နက်ကလေးရဲ့အောက်ခြေမှာက ဆီးခုံအမွှေးခပ်ပါးပါးလေးရယ် အဲ့ဒီအောက်မှာမှ အဆီတ၀င်းဝင်းနဲ့ ဖောင်းအိနေတဲ့ အပျိုကြီးအဖုတ်ဖောင်းဖောင်း။ နို့ကြီးတွေကိုချေမွှဆုပ်ကိုင်ပစ်၊ ဆံနွယ်အရှည်ကြီးတွေကိုမွှေးပစ်၊ တင်ပါးကားအိအိကြီးကို ဖျစ်ညှစ်.. အဲ့လိုမချင့်မရဲတွေ အတင်းလုပ်ပစ်လိုက်ပီး ပက်လက်လှန်အိပ်ပီးခဏငြိမ်နေလိုက်မိတယ်။ ကိုယ်ခူးမယ့်ဟန်ပြင်နေတဲ့ စံပယ်ဖူးလေးကို မခူးဆွတ်လိုက်ရတော့ မချင့်မရဲဖြစ်တဲ့ စိတ်တစ်ခုနဲ့ စံပင်ပင်ရဲ့ အကိုင်းအခက်၊ရိုးတံတွေကို သိမ်းကြုံးပွေ့ဖက် နမ်းရှုံ့ပစ်နေမိသလိုမျိုးပေါ့။
(ဟိဟိ မောင်ထင်မောင်ထင်.. အမလေး ငရဲတွေကြီးကုန်တော့မယ် ကန်တော့ပါဆရာကြီးခင်ဗျာ ) ခဏလောက်ကြာတော့မှ ကျနော့်ရူပဗေဒဆရာမလေး ခေါင်းထောင်ထလာပီး ပက်လက်အိပ်နေတဲ့ ကျနော့်ကို အပြုံးချိုချိုလေးနဲ့ ငေးကြည့်ရင်း ကျနော့်ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ သူ့လက်ချောင်းသွယ်သွယ်လေးတွေနဲ့ စာရေးသလိုဟိုခြစ်ဒီခြစ်လုပ်ပီးဆော့ကစားနေတယ်။ လိင်ဆာလောင်မှုမပြေပျောက် လို့ နေရထိုင်ရခက်နေတဲ့ ကျနော်ကတော့ ကိုယ့်လက်ကိုကိုယ်ခေါင်းအုံးပီး ခပ်တည်တည်နဲ့သူ့မျက်နာလေးကို ငေးနေမိတယ်။ ဘာလို့ ဆက်မလုပ်တာလဲ ကိုဖိုးသက်လေး (မပွင့်တပွင့်လေးနဲ့ ရှက်ဝဲ၀ဲလေးမေးလာတယ်) ဆရာမလေး မခံနိုင်မှာစိုးလို့ပါဗျာ(ခပ်ယဲ့ယဲ့ပြုံးပီး ကျနော်ပြန်ဖြေတယ်) ဘယ်သူက မခံနိုင်ဘူးလို့ ပြောသလဲရှင် နာတယ်ဆို? ဒါနဲ့ပဲ မလုပ်ရက်တော့ဘူးပေါ့ ဟုတ်လား … … … (ကျနော်ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်တယ်) ချိုက ကိုဖိုးသက်လေးကို အရိုင်းဆန်လွန်းတဲ့ ဇွတ်တရွတ် ကောင်ဆိုးလေးမှတ်နေတာ သိလား … … …(ကျနော်ပြုံးပြနေမိတယ်) တကယ်တမ်း ကျမရဲ့ကိုဖိုးသက်လေးက.. (ပြောရင်း အသံကတိမ်ဝင်သွားရော မျက်ရည်တွေက ၀ဲနေသေးတယ် ကြည်နူးနေတဲ့ အပြုံးလေးနဲ့) ကျမ ကိုဖိုးသက်လေးကို အရမ်းချစ်မိနေပီကွာ..လို့ အံကြိတ်ထားတဲ့လေသံလေးနဲ့ပြောရင်း ကျနော့်ရင်ဘတ်ပေါ်ကို ပါးအပ်ရင်း ဖိအိပ်လာရော။ ချောမွှတ်နေတဲ့ လက်မောင်းအိုးအိလေးနဲ့ကျောပြင်လေးကိုပွတ်ပေးရင်း ကျနော်သူ့ကိုဖက်ထားပေးလိုက်တယ်။ ခဏနေတော့ အပ်ထားတဲ့ ပါးကိုခွာပီး ကျနော့်ပါးပြင်တွေကို တရွှတ်ရွှတ်နဲ့ နင့်နင့်သီးသီး နမ်းတော့တာပဲ။ လက်ထောက်ပီး ကျနော့်ကိုမိုးထားတာဆိုတော့ကာ သူ့ချိုဗူးကြီး၂လုံးက တရမ်းရမ်းနဲ့ ကျနော့်ရင်ဘတ်ကို ထိမိနေတာပေါ့။
ပါးတွေကိုနမ်းပီးတာနဲ့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကျနော့်နှုတ်ခမ်းကို သူအရင်စပီးစုပ်နမ်းတော့တာပဲ။ အားရပါးရစုပ်ရုံတင်မကဘူး လျှာချွန်ချွန်လေးလုပ်ပီးထိုးထည့်ပီး လျှောက်မွှေတော့တာ လူကိုယ်သည်းတုန်အူတုန်ဖြစ်တယ်(နောက်တော့မှ အဲ့လို လျှာကစားတာ ဘယ်ကတတ် လာတာတုံးဆိုပီး နောက်တောက်တောက်မေးတော့ ရှင်လေရှင် ကျမကို အဲ့လိုလာလာလုပ်ပီး သင်သင်ပေးထားတာလေတဲ့ဟီဟိ) ကျနော်လည်း အလူးအလှိမ့်ဖြစ်လာတော့ကာ ကျနော့်ရင်ဘတ်နဲ့ထိနေတဲ့ သူ့ချိုဗူးထွားထွား၂လုံးကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ပင့်ကိုင်ထားပီးချေတော့တာပေါ့။ ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ ကျော ပြင်ကိုပွတ်၊ သူနမ်းစုပ်တာကြမ်းလာရင်ကြမ်းလာသလို တင်ပါးအိအိကိုလှမ်းကိုင်ပီး ချေ အဲ့လိုမျိုးတွေပြန်ဖြစ်လာကြရော။ အရှိန်ပြန်တက်လာကြပြန်ပီဆိုပါတော့ဗျာ။ နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းနေရင်းကနေ အောက်က ထောင်ထလာတဲ့ဒုံးပျံကို မသိသလိုဘာလိုလိုနဲ့ လှမ်းပီးကိုင်ရော။ ပထမတော့ မရဲတရဲတုန်တုန်ရီရီရယ်။ နောက်တော့ ခပ်တင်းတင်းပဲဆုပ်ကိုင်ထားတော့တာ။ အဲ့ဒီမှာ သူ့လက်အပေါ်က ကျနော့်လက်ကိုအုပ်ကိုင်ပီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်နည်း ပြပေးလိုက်တော့ သူသဘောပေါက်သွားတယ်။ နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်လျှာကစားရင်း အောက်က ဒုံးပျံလျှောတိုက်ပေးတဲ့ အနေအထားရောက်သွားတယ်။ နဂိုထဲက ရေလည်တင်းထား တဲ့စိတ်ကြောင့် ဘယ်ကြာကြာခံနိုင်ပါ့မလဲ ကျနော်ပီးချင်လာရော။ အသက်ရှူသံတွေပြင်းလာပီး သူ့နို့တွေကို ဆုပ်ထားတာ တအားတင်းလာတာကို သတိထားမိလို့လားမသိဘူး နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်နေတာကိုရပ်ပီး ခွာလိုက်တယ်။ မျက်နာချင်းကပ်ထားရာကနေ ကျနော်မအောင့်နိုင်တော့ဘူး ဆရာမလေးရာ မြန်မြန်လေး မြန်မြန်လေး.. လို့ ဖီလင်တအားတက်နေတဲ့လေသံနဲ့ပြောမိလိုက်တော့မှ အောက်က လျှောတိုက်ပေးတာ တဖတ်ဖတ်နဲ့မြန်လာတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဘယ်လိုမှမအောင့်နိုင်တော့လို့ ဟားးး ထွက်ပီထွက်ပီ လို့ပါးစပ်ကအော်လိုက်မိတော့ လက်ကလျှောတိုက်ပေးနေလျှက်နဲ့ ကိုယ်ကိုမတ်ပီး ထိုင်လျှက်နဲ့ အောက်ကဒုံးပျံကို ဆရာမ လေးလှမ်းကြည့်နေတုံးမှာပဲ ဖွေးကနဲဖွေးကနဲနေအောင် ကျနော့်ဟာတွေက ပန်းထွက်လာပါလေရောလားဗျာ။
ကျနော့်ရူပဗေဒဆရာမလေးနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဟာ လက်နဲ့ပီးလိုက်ရပေမယ့်လို့ အီစလံဝေသွားအောင်ကို ကောင်းတယ်။ ထွက်လိုက်တဲ့ဟာတွေကလည်းများချက်အဟီး။ သူ့လက်တွေကို အကုန်ပေပွကုန်တာပဲ။ ပန်းထွက်ထွက်လာချင်း သူ့ကိုယ်လုံးလေးက ဆတ်ကနဲတောင်တုန်သွားသေးသလိုပဲ။ (အပျိုကြီးက ယောကျာ်းနဲ့တစ်ခါမှမတစ်ခါဖူးတော့ ဒါမျိုးလည်းမြင်ဖူးတာမှမဟုတ်တာဟီဟိ) လန့်သွားဟန်တူပါရဲ့။ ဂွင်းလုံးချွတ်ချထားတဲ့ သူ့ထမီလေးကို ယူပီးလက်ကိုသုတ်၊ဒုံးပျံက ရွှဲနေတဲ့ ချွဲပျစ်ပျစ်တွေကို အကုန်ပြောင်အောင်သုတ်သင်ပေးနေရင်း သုတ်ထွက်သွားပေမယ့် မပျော့မမာ နီရဲရဲတင်းပြောင်နေဆဲဒုံးပျံထိပ်ဖူးကို ဆတ်ကနဲ ပါးစပ်နဲ့ကောက်ငုံပီး ပြွတ်ဆိုကောက်စုပ်ပီး ချက်ချင်းဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်တော့ ကျနော့်မှာ အလန့်တကြားနဲ့ အံသြမှင်တက်သွားမိသေးတယ်။ လူလည်း ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူးရယ်။ ရှက်ပြုံးလေးပြုံး နှာခေါင်းလေးရှုံ့ပြလာရင်း… ဘာလဲ.. မကျေနပ်ဘူးလား ရှင်လည်း ချို့ဟာကို အဲ့လိုလုပ်တာပဲ ဟွန်း တဲ့ ချစ်စရာလေးဗျာ ကျနော့်မှာ မအောင့်နိုင်တော့ပဲ အဟားကနဲအော်ရယ်လိုက်ရင်း သူ့ကိုအတင်းဆွဲလှဲပီး ဖက်ထားလိုက်မိတယ်။ အဲ့ဒီလိုဖက်ထားရင်း ရင်ခွင်ထဲကနေ ခေါင်းလေးမော့ပီး အတည်အပေါက်နဲ့မေးလာသေးတယ်။ ကိုဖိုးသက်လေး ချိုတို့၂ယောက် အိမ်ထောင်ပြုလို့ဖြစ်ပါ့မလားတဲ့။ ဟမ်! ဘာလို့မဖြစ်တာတုံး ဆိုတော့ ဟိုလေ! ၀င်မှ မ၀င်တာ.. ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့.. ကျနော့်မှာရယ်လိုက်ရတာဗျာ။ သူကတော့ ဘာရယ်တာလဲ..ဟုတ်တယ်လေ.. ရှင်လေးကလဲ မလုပ်ရက်.. ကျမဟာလည်းအပေါက်ကကျဉ်း.. ထိပ်ဖျားလေးနဲ့တင်နာလိုက်တာ ဘယ်လုပ်ပီး ဘယ်လိုကလေးမွေးကြမတုံးတဲ့။ အတည်အပေါက်နဲ့ပြောနေတာဗျ။ ကျနော့်မှာ သူ့ကိုဖက်ဖက်ပီး တဟားဟားနဲ့ကိုဖြစ်ရော။ ခဏငြိမ်ကျသွားပီး ဆတ်ကနဲကိုယ်လုံးလေးကို တွန့်ပီး ကိုဖိုးသက်လေး.. ရှင့်ဟာကြီးက ကြီးလွန်းတာကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတဲ့ မေးလာပြန်တယ်။
ကျနော့်မှာ မအူမလည်ကလေးမလေးနဲ့တွေ့နေရသလိုလိုကိုဖြစ်ပီး တဟီးဟီးနဲ့။ ဟုတ်ပူး ဆရာမလေးဟာက အပေါက်ပိတ်နေတာဖြစ်မယ်လို့ နောက် လိုက်တော့ ဟမ်! ဟုတ်လား တဲ့အဟီး။ အဲ့ဒီနေ့က အဖြစ်အပျက်ကတော့ အဲ့ဒီလောက်ပါပဲ။ အဆုံးစွန်ထိတွယ်ပီထင်ပီး ၀င်ဖတ်တဲ့ညီအကိုတွေတော့ ဆဲချင်နေကြမလားမသိဘူး။ တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀နဲ့ အောဇာတ်လမ်းက မတူဘူးဗျ။ ပထမအကြိမ်မှာ လျှောကနဲဆိုတာ အာလူးဗျ။ ၂ယောက်စလုံးအတွေ့အကြုံရှိပီးသားဆိုရင်တော့ ဟုတ်တာပေါ့။ တကယ်တမ်းနှစ်နှစ်ကာကာချစ်ကြပီး ဘာမှအတွေ့အကြုံမရှိကြတဲ့ စုံတွဲတွေမှာတော့ မလွယ်လှပါဘူးဗျာ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ(ယုံချင်ယုံမယုံချင်နေ) နောက်ထပ်တစ်လလောက်နီးပါးဒီအတိုင်းပဲဆက်ဖြစ်နေကြရော။ ဖင်တုံးလုံးချွတ်ပီး တစ်ကိုယ်လုံးမမြင်ဖူးတဲ့နေရာမကျန်တဲ့အထိတော့ အဆင့်ရောက်လာကြပီဆိုတော့ကာ သူကျနော့်ကို လက်နဲ့လုပ်ပေးတာ၊ နောက်ပိုင်းပါးစပ်နဲ့စုပ်ပေးတာ၊ ကျနော်ကလဲ ဖုတ်ဖုတ်လျှက်၊အစိစုပ်ပေး.. အဲ့လိုနဲ့ပဲ၂ယောက်သားစိတ်ဖြေဖြေနေရတာပေါ့။ ထည့်တော့ထည့်ကြည့်ကြတာချည်းပဲ မရဘူးရယ်။ တစ်ပတ်ကိုတစ်ခါလောက်တော့ ထည့်စမ်းကြည့်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အ၀တင်ပဲ၊ထိပ်ဖူးမြုပ်၊ ထပ်ထိုးထည့်ရင်အော်၊သနားတော့ရပ်ပစ်လိုက်နဲ့သံသရာကိုလည်နေတာဟီးဟီး။ အဲ့လိုဖြစ်ပီးနောက်နေ့ ဆို ဆရာမလေးခမျာ ရေဆေးရင်တောင် အဖုတ်က စပ်ဖျင်းဖျင်းနဲ့သွေးစလေးတွေတွေ့တယ်တဲ့။ ကျနော်က ဘာမှမဖြစ်ရဘူး ကျနော့်ချစ်သူဆရာမလေးက စိတ်ဓာတ်တွေကျလို့ပေါ့။
ကျမ အိမ်ထောင်မပြုဖြစ်တော့ဘူးလားမသိပါဘူး ဆိုတာချည်းပဲ ညည်းနေရှာတာအဟီး။ ကျနော်ကတော့ တဟားဟားပဲရယ်နေလိုက်တယ်။ အပျိုကြီးခွတီးခွကျလေးကိုး တကယ်တမ်း ကျနော်လုပ်ချင်ရင်(နာချင်နာမနာချင်နေစိတ်မျိုးထားလိုက်ရင်) မ၀င်ပဲနေမလားဗျာ။ ချစ်လွန်းလို့ သနားလို့ပါဆိုနေ ထားလိုက်ပါတော့။ ဘုမသိဘမသိအဆင်ပြေချင်တော့လဲ နေ့ခင်းဖက်ကြီး သူ့ဆီရောက်သွားရင်း ဒိန်ချဉ်သောက်ချင်တယ်ကိုဖိုးသက်လေးရာ လို့ပူဆာလို့ ဒိန်ချဉ်ထွက်ဝယ်ပေးပီးပြန်ရောက်လာတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း နေ့ခင်းဖက်ဆိုတော့ သူ့အိမ်မှာ သူတစ်ယောက်ထဲပေါ့။ မီးဖိုဆောင်အနောက်က တရုတ်စကားပင်အရိပ်အောက်က ကွပ်ပျစ်ကလေးပေါ် ဒိုင်ချဉ်သောက်ရင်း ပူးကပ်နေကြရာကနေ ကျနော်က ဘေးမှာထိုင်နေရင်း ချိုဗူးတွေဘာတွေကို လက်ဆော့၊ ဂုတ်ပိုးတွေနားရွက်တွေကို လျှောက်နမ်းနေတာဗျ။ ကိုဖိုးသက်လေး ငါဒိန်ချဉ် ကောင်းကောင်းသောက်ပါရစေ.. လက်မဆော့နဲ့ကွာ ဆိုပီးဟောက်လာတယ်။ အိမ်နောက်ဖေးဆိုပေမယ့် အနောက်ဖက်မှာ ချုံတွေသစ်ပင်တွေနဲ့ အရှေ့ဖက်က မြင်ကွင်းကိုတော့ မီးဖိုဆောင်ကကွယ်ထားတော့ လုံခြုံတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်နေတာဗျ။ သူတွန်းတွန်းလွှတ်နေပေမယ့် ကျနော်က ပိုပိုဆိုးလာတယ်။ အတင်းလျှောက်နှိုက်တော့တာပဲ။ ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲကွာ ဘာညာနဲ့ ပထမတော့ ညောင်သေးတယ် နောက်တော့ ငြိမ်ပီးမသိချင်ယောင်ဆောင် ဒိန်ချဉ်အေးအေးလေးကို တရွှတ်ရွှတ်နဲ့သောက်ရင်း အနှိုက်ခံနေရောဟီးဟီး။ ဒိန်ချဉ်တစ်ခွက်လည်းပြောင်ကော တင်ပလင်ခွေထိုင်နေတဲ့ ဆရာမလေးရဲ့ထမီကိုဖြေပီး အဖုတ်ကိုစမ်းလိုက်တာ အရည်တွေလည်းရွှဲနေပီ။ ကိုင်း! ဒိန်ချဉ်လည်းကုန်ပီ ဟိုဒင်းလည်းဖြစ်လာပီ အိမ်ပေါ်သွားကြမလား ကိုဖိုးသက်လေး ..ဆိုပီး မချိုမချဉ်ရုပ်ကလေးနဲ့မေးလာတယ်။
(အဖုတ်လျှက်ခံချင်ပီပေါ့လေဟီး) အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျနော်က ရေလည်တောင်နေပီဗျ။ ခုလိုခြံဝင်းထဲကြီးမှာ ပေါ်တင်ကြီး လျှောက်နှိုက်နေရတာကို ဖီးလ်တက်နေတာဆိုတော့ကာ ထမီကိုအတင်းဆွဲလှန်ပစ်လိုက်ကော။ ကိုဖိုးသက်လေး.. ဘာလုပ်တာလဲ သူများမြင်လိမ့်မယ်လို့ အော်ရောဟီးဟီး။ မရတော့ဘူးဗျာ လူကိုစိတ်တအားထလွန်းလိုက်တုန်လာတာ။ ဒါနဲ့ကွပ်ပျစ်ပေါ်ဆွဲလှဲချ၊ ထမီဆွဲလှန်လိုက်တော့(နေ့ခင်းကြောင်တောင် ခြံထဲမှာကြီးနော်) အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးဘွားကနဲပဲ။ ဘာမှပြောမနေတော့ပဲ ကျနော့်ပုဆိုးကိုဖြေချ ဒုံးပျံမာတင်းတင်းကိုဆွဲထုတ်ပီး အရည်စို့နေတဲ့ အဖုတ်ဝမှာတေ့ပီး အခါတိုင်းလို ဖိသွင်းကြည့်လိုက်တယ်။ အရင်လိုပဲမျှော်လင့်ထားတာဗျ။ ထိပ်ဖူးလေးမြုပ်ရုံရသေ့စိတ်ဖြေလေးပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ မမျှော်လင့်ထားပဲ အဆုံးထိ ပလွတ်! ဆိုပီးဝင်သွားရောဗျာ။ လူကိုဟာကနဲကြီးဖြစ်သွားတယ်။ ခုနက ဟာကွာဘာညာနဲ့ညောင်နေတဲ့ ဆရာမလေးခများလေး အီးး ကနဲအော်ပီး ကြပ်လိုက်တာကွာ လို့တစ်ခွန်းပဲအော်ပီး ငြိမ်ကျသွားရော။
နှစ်ပေါင်းများစွာသာကြာသွားခဲ့တယ် ကျနော့်ဘယ်ဖက်ရင်အုံတစ်ခုလုံးဟာ အဲ့ဒီနေ့က အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်တွေးလိုက်တိုင်း တဆတ်ဆတ်တုန်နေသေးတယ် ညီအကိုတို့ရာ။ နားရွက်တွေ၊ပါးပြင်တွေဟာ ထူပူတက်လာတယ်။ လူတစ်ကိုယ်လုံးလည်းကတုန်ကယင်ကြီးရယ်။ ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ အတော်များများသော မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံက ခါးသီးခဲ့ကြတာများတယ်။ သူတို့ချစ်ဦးသူတွေရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်တွေကိုဆိုလိုတာပါ။ ကွဲပြဲကုန်တာက ခပ်များများ ၉၀%ဆိုပါတော့။ ကိစ္စပီးတာနဲ့ တဖက်သားမိန်းကလေးခမျာ ငါတော့ အပျိုမဟုတ်တော့ပါလားဆိုတဲ့ ၀မ်းနည်းစိတ်တွေ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုတွေအကုန်ပေါင်းပီး မျက်ရည်ကျတာတို့၊ ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုပစ်လိုက်တာတို့ ဖြစ်ကြတာချည်းပဲဆိုတာ ကျနော်ကြား ဖူးခဲ့တာကိုးဗျ။ ကျနော်နဲ့ ကျနော်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ရူပဗေဒဆရာမလေးတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်က အဲ့လိုတွေမှမဟုတ်ခဲ့တာကိုး။ ဆက်လုပ်လို့မရရင် ရှေ့ဆက်မတိုးတော့ပဲ အောင့်အီးသည်းခံ၊ လိင်ဆာလောင်မှုကိုရှေ့တန်းမတင်၊ အရိုင်းမဆန်ခဲ့မိလို့လားတော့မသိဘူး တကယ်တမ်း အဆင်ပြေပြေ ဖြစ်သွားခဲ့ကြတဲ့အခါ အင်မတန် ကြည်နူးရတဲ့အပြင် “သေတောင်မမေ့ဘူး” ဆိုတာလိုဖြစ်ခဲ့ရတာဗျ။
ကျနော်မှတ်မိသလောက်ပြန်ပြောရရင်.. တရုတ်စကားပန်းအပွင့်ဖြူလွှလွှတွေကြွေကျထားလို့ မွှေးမြမြရနံ့လေးသင်းနေတဲ့ အဲ့ဒီကွပ်ပျစ်ကလေးပေါ်မှာပေါ့ဗျာ လေအေးအေးလေးတွေက တဖြူးဖြူးရယ်။ သစ်ရွက်လေတိုးသံတွေက ဆူညံနေတာကလွှဲလို့ ခြံဝင်းကြီးထဲ လူသံသူသံတွေတိတ်လို့။ ကျနော်ချစ်တဲ့ ရူပဗေဒဆရာမလေးက ကွပ်ပျစ်ကလေးပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေး ဖွေးဖွေးဖြူတဲ့ ပေါင်တံလှလှလေး၂ချောင်းကို အတင်းကားထားပေးတယ်။ ထမီက ခါးအထိရောက်အောင်လှန်တက်နေပီ။ အိမ်နေရင်းဝတ် ရှပ်အနက်ရောင်လေးက ကြယ်သီးတွေပြုတ်ပျက်ထွက် ၀ါဝင်းဝင်းချိုဗူးကြီးတွေက တစ်ခြမ်းစီပေါ်လို့။ သူ့ပေါင်ကြားထဲမှာ ဆောင့်ကြောင့်လေးထိုင်ထားတဲ့ ကျနော့်မှာ အောက်ပိုင်းဗလာနဲ့ .. အရည်တွေရွှဲနစ်နေတဲ့ အပျိုကြီးပေါက်စ လေးရဲ့ အဖုတ်ဖောင်းအိအိလေးထဲ စီးစီးပိုင်ပိုင်ထိုးခွဲဝင်ရောက်နေတဲ့ ဒုံးပျံမာတင်းတင်းနီရဲရဲကြီးရဲ့ အ၀င်အထွက်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်၊ အသက်ပြင်းပြင်းရှူလိုက်၊ ဆရာမလေးရဲ့ခါးကျင်ကျင်လေးကို လက်၂ဖက်နဲ့စုံကိုင်ထားရင်း ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ကို ဖြေးဖြေးလေးပဲလုပ်နေမိတာပေါ့ဗျာ။ လင်းလင်းချင်းချင်း နေ့လည်ခင်းကြီးမို့ မူလက တစ်ယောက်ယောက်တွေ့သွားမလားဆိုတဲ့ စိုးထိတ်တဲ့စိတ်က ၂ယောက်စလုံးမှ ရှိတော့ဟန်မတူတော့ဘူး။
ခြံထဲလူဝင်လာရင်တောင် ကိုယ်က အရင်အသံကြားရပေမယ့် ကိုယ့်ကိုမမြင်နိုင်တဲ့ မီးဖိုဆောင်အကွယ်လေးမှာပါဆိုတဲ့ စိတ်အပြင် အောင်မြင် တော့မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်က ကြီးစိုးထားပီမို့လားမသိဘူး အသံထွက်ပီးကို ညည်းညူနေကြတာဗျ။ ဟားးးး …. ဆိုတော့လေမှုတ်ထုတ်သံရယ် … ရှီးးးး ဆိုတဲ့လေရှူသွင်းသံတွေဟာ ၂ယောက်စလုံးဆီကနေ အကျယ်ကြီးပဲထွက်ကုန်ကြပီ။ ဆ..ဆရာမလေး!! နာလားဟင် နာရင်ပြောနော် တစ်…တစ်ဆို့ဆို့ကြီး ကိုဖိုးသက်လေးရာ!! ချိုလေ.. ချိုမောလိုက်တာ သေမလိုကြီးဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူးဟာ အင်းးး (ပက်လက်ကလေးလှန်ရင်း အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကိုက်ထားတဲ့ ဆရာမလေးက တုန်တုန်ရီရီနဲ့ပြန်ပြောလာတယ်) ၀င်တယ်သိလား အဆုံးထိ.. အိနေတာပဲ အထဲမှာ.. ဖူးးး !! (ကျနော်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ အသာလေးခေါင်းထောင်ထလာပီး အောက်ကိုလှမ်းကြည့်တယ် အရည်တွေနဲ့ပြောင်လက်နေတဲ့ ကျနော့်ဒုံးပျံက ဖြေးဖြေးချင်း သူ့အဖုတ်ထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်) အဟင်းးး !! မနာဘူး .. ဒါပေမယ့် တစ်ဆို့ဆို့ကြီးနဲ့ မောလာပီ ချို ငိုချင်သလိုလိုဖြစ်လာတယ် ရင်ထဲမှာ တလှပ်လှပ် .. အမေ့ .. ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူး ကိုဖိုးသက်လေးရာ နည်းနည်းလေး မြန်ကြည့်မယ်နော်.. မခံနိုင်ရင်ပြောနော် ဆရာမလေး(ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ဆီးခုံချင်း ရိုက်သံဖန်းကနဲထွက်လာတဲ့ အထိ ၂ချက်လောက်ခပ်သာသာဆောင့်လိုက်မိတယ်) အင်းးး ရှီးးး ပထမဆုံးအကြိမ် အားပါပါ အဆောင့် -ိုး ခံလိုက်ရလို့လားမသိဘူး အလန့်တကြားလေးနဲ့ သူ့ခါးကျင်ကျင်လေးကို စုံကိုင်ထားတဲ့ ကျနော့်လက်ဖျံတွေကို လက်နဲ့ဖမ်းဆုပ်လာတယ်။ နာများနာသွားရှာလေသလားလို့ စိုးရိမ်သွားတဲ့ ကျနော်က သူ့မျက်နာကိုလှမ်းအကဲခတ်လိုက်တော့ အောက်နှုတ်ခမ်းကို ပြတ်ထွက်မတတ်ကိုင်ထားရင်း ခေါင်းငြိမ့်ပြတယ်။ (ဘာမှမဖြစ်ဘူး မနာဘူးပေါ့လေ) အဲ့ဒါအပြင် ကျနော့်လက်၂ဖက်စလုံးကို ဆွဲယူသွားပီး ရှပ်အင်းကျီဟပြဲထဲထိုးထည့်ပေးတယ်။
ချိုဗူးအိစက်စက်ကြီးအပေါ်အုပ်ပီးကိုင်ခိုင်းထားတာ။ အင်းကျီရင်ဘတ်ဟပြဲထဲကနေ ဘရာပျော့ပျော့ကို လိမ္မော်သီးအခွံနွှာတဲ့အခါလှန်သလို ဆွဲချပီး လက်၂ဖက်နဲ့ အုပ်ကိုင်ထားရင်း နို့သီးခေါင်းသေးသေးလေး၂ခုကို လက်ညှိုးလက်မနဲ့ညှပ်ပီး လှည့်ပေးချေပေးရင်း အောက်က ပုံမှန်လေးဆက်ဆောင့်နေလိုက်တယ်။ မိန်းမ အတွေ့အကြုံအတန်ငယ်ရှိခဲ့ဖူးပီဖြစ်တဲ့ ကျနော့်အတွက် ဒီအခြေနေဟာ အစစအရာရာအဆင်ပြေသွားပီဆိုတာ ရိပ်မိလိုက်ပီ။ ပေါင်ကြား၂ခုထဲ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ထားရင်း နို့၂လုံးကိုစုံဆွဲပီး ဖြေးဖြေးချင်း ဆောင့်တဲ့အရှိန်ကိုတင်တော့တာပဲ။ ထစ်ထစ်ထစ်ထစ်အရသာနဲ့ စီးကနဲစီးကနဲဝင်ဝင်သွားတာဘယ်လို အရသာမှန်းကိုမသိပါဘူးဗျာ။ ၁၀မိနစ် ၁၅မိနစ်လောက်ကြာလာတော့ အတော်ကြီးကို အ၀င်အထွက်က အဆင်ပြေသလို ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်း ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်မဟုတ်တော့ပဲ ကြမ်းလာတော့တာပေါ့။ သိပ်တောင်မကြမ်းလိုက်ရပါဘူးဗျာ။ အတင်းကော့လှန်တက်သွားတယ်။ အမေရေ!! လို့အတင်းအော်လာတယ်။ ပက်လက်အိပ်ထားရာကနေ ရုန်းကန်ပီး အတင်းထထိုင်ဖို့ကြိုးစားလာတယ်။ ဘာလဲဆိုတာ သိလိုက်တဲ့ ကျနော်က အတင်းရုန်းပီးထထိုင်မလိုလိုတွေလုပ်၊ ကပေါက်တိကပေါက်ချာအော်သံတွေထွက်လာတဲ့ ဆရာမလေးအပေါ် မှောက်အိပ်ချပစ်လိုက်တော့တာပဲ။ ကျနော့်ကိုယ်လုံးနဲ့ အတင်းဖိထားတာကိုတောင် တွန်းထိုး ရုန်းကန်နေတာ(သူ့ကိုယ်သူဘာလုပ်မိနေမှန်းတောင်သိပုံမရတော့ဘူးထင်တယ်) ကိုဖိုးသက်လေးးး ကိုဖိုးသက်လေးးး ဆိုတာတွေပဲ ဆက်တိုက်ရွတ်နေတာဗျ။ ပေါင်၂ချောင်းနဲ့ ကျနော့်ခါးကိုလည်း အသေညှစ်ပီးလိမ်ထားတော့တာ။
ဒါတင်မကဘူး ကျနော့်ဒုံးပျံကိုလည်း အထဲက ညှစ်ထားချက်က တင်းကြပ်နေတာပဲ။ အဲ့ဒီတော့မှ မပီးအောင်စိတ်ကို အတင်းထိန်းထားတဲ့ ကျနော်လည်း မရတော့ဘူး စိတ်ကိုလျှော့ချပစ်လိုက်ပီး ဆရာမလေးနဲ့ ဂျိုင်းအောက်ကနေ လက်၂ဖက်ကိုလျှို ပုခုံးလေးကို စုံကိုင်ပီး (သူ့ပေါင်၂ချောင်းနဲ့ အညှပ်ခံထားရတဲ့ကြားထဲကနေ) ကြိတ်ကြိတ်ပီး တစ်ချက်ချင်းပဲ ကလော်ဆောင့်လေးဆောင့်ရင်း ၄-၅-၁၀ချက် အတွင်းမှာကို အဖုတ်အတွင်းသားနံရံနုနုလေးတွေရဲ့အထိအတွေ့ရဲ့ အရသာရှိမှုကိုခံစားရင်း ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်မိတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးအကြောတွေတဆတ်ဆတ်တုန်တက်သွားတဲ့အထိ ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ အရည်တွေကုန်သွားပီဆိုတာ သိနေလျှက်နဲ့တောင် အဖုတ်ထဲဒုံးပျံတပ်ထားလျှက် တဇိဇိနဲ့ညှစ်ညှစ်ထုတ်နေမိတုံး။ အပေါ်မှာရေးခဲ့သလိုဗျာ သူများတကာတွေများ ဒီအချိန်ဆို မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ဇာတ်လမ်းတွေဖြစ်နေလောက်ပေမယ့် ကျနော်နဲ့ရူပဗေဒဆရာမလေးတို့အခြေနေက တစ်မျိုးရယ်။ ၂ယောက်လုံးကျေနပ်တဲ့အဆင့်ထိ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ရောက်သွားကြပီနော်။ ပီးလဲပီးသွားကြပီ။ လူမြင်နိုင်တဲ့နေရာကြီးမယ် သောင်းကျန်းရင်းဖြစ်သွားကြတာ။ အဲ့ဒီမှာ ဒုံးပျံကလည်း ဒေါသတကြီးပန်းထုတ်လိုက်ရပီးတော့ နည်းနည်းပြန်ပျော့လာပီ လုံးဝကြီးတော့ အယောင်မလျော့သေးဘူး။ အဲ့ဒါကို၂ယောက်စလုံးက မချွတ်ချင်ဘူးရယ်အဟိ။ ကျနော်က မှောက်အိပ်နေရာကနေ ပါးလေးကို ရွှတ်ကနဲနမ်းပီး ထထိုင်ဖို့လုပ်တယ်နော် သူက အတင်းဖက်ထားတယ် မထနဲ့ဦးပေါ့။ ကျနော်လည်းစိမ်ထားပီးဇိမ်ခံနေလိုက်တယ်။ နောက်တော့မှ သူလည်းတွေးမိမယ်ထင်တယ်..မဟုတ်သေးပါဘူး လူမိနိုင်တဲ့အနေအထားကြီး ထမှဖြစ်မယ်ဆိုပီး သူက ကျနော့်ကို တွန်းပီးထဖို့လုပ်ပြန်တယ်။
ကျနော်က အတင်းဖိထားပြန်တယ်။ နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်ပီး အောက်က၂ချက်၃ချက်လောက် ညှောင့်လိုက်သေးတာဟီး။ ပီးတော့ မျက်နာချင်းခွါ၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စိုက်ကြည့်ပီး ပြုံးပြနေကြတာဗျ။ အောင်ပီ အောင်ပီ ပေါ့လေအဟိ။ ကိုင်း ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမြင်လဲ? ပျော်စရာကြည်နူးမကောင်းဘူးလားဗျာ။ ကျနော့်ဘ၀မှာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးရှိခဲ့ဖူးတယ်ဗျ။ အင်မတန်မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ အရာတစ်ခုခုကိုရလိုက်တာမျိုးတွေအပြင် သေတွင်းကလွှတ်ခဲ့တာမျိုးတွေလည်း တစ်ပုံကြီးပဲ(ဥပမာပြောရရင် အဲ့ဒီခေတ်ကနာမည်ကျော် ရှမ်းသင်္ကြန်တစ်ခုမှာ မူးမူးနဲ့ ကိုယ့်ရပ်ကွက်ထဲ ရေလာကစားတဲ့ ယူနီဖောင်းဝတ်ကိုကိုတွေ မူးရူးပီး အမျိုးသမီးတွေကို လက်သရမ်းတာကနေအုပ်စုလိုက် ခုတ်ကြထစ်ကြ၊ လုံးထွေးသတ်ပုတ်ကြရင်း ကျနော်နဲ့လုံးထွေးနေတဲ့ ကိုကိုက ရင်ဘတ်ပေါ်တက်ထိုင်ပီး ထိုးတာခံနေရတော့ မနိုင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာရိပ်မိပီး လက်ပစ်ဗုံးပင်ကိုဖြုတ်ပစ်လိုက်တယ်.. ကျနော့်ကိုလည်းမလွှတ်ဘူးအဟီး လက်ပစ်ဗုံးပင်က ပြုတ်သွားပီ..လက်က ညှစ်ထားတာကိုလွှတ် ပစ်လိုက်လို့ကတော့ ၂ယောက်လုံးအသေပဲ.. နှစ်ဖက်လုံးက လူတွေလည်း ပြေးကုန်ပီ.. ကုသိုလ်ကံအကြောင်းတရားလေးကြောင့်သာလျှင် မသေခဲ့တာပေါ့ဗျာ) မဆိုင်တာတွေလျှောက်အာလူးဖုတ်မိပြန်ပီအဟီး။ ပြောချင်တာကဗျာ အဲ့လို တစ်စက္ကန့်အတွင်းသေသွားနိုင်တဲ့ အခြေနေက ကံကောင်းထောက်မပီးလွှတ်ခဲ့တာမျိုးတွေတုံးကတောင် စိတ်သိပ်မလှုပ်ရှားသလိုလိုပဲ။ ခုလို ကိုယ်ချစ်တဲ့ ဆရာမလေးနဲ့အောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်သွားတဲ့ အရသာက တစ်ဘ၀လုံးမှာကြုံခဲ့တဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေထက် အပုံကြီးသာနေတယ်ဗျာ။ ကျနော်ပြောချင်တာ ညီအကိုတို့သဘောပေါက်မလားတော့မသိဘူးအဟီး။ နားမလည်ဘူးဟ နင့်ဟာက မဆီမဆိုင်ကြီးလို့ပြောမယ်ဆိုလည်း ကျနော်မရှင်းပြ တတ်တော့ဘူး။ ဆိုလိုချင်တာက ဘ၀တစ်ခုလုံးမှာ အဲ့ဒီတုံးက ကွပ်ပျစ်ပေါ် ဖြစ်ခဲ့တာလေးလောက် ဘယ်အရာကမှ ကျနော့်ကို ပိုမိုတဲ့ စိတ်မလှုပ်ရှားမှု မပေးနိုင်တော့ဘူး အဲ့လိုဗျာ။ ချိုကန်းတို့ထုံးစံအတိုင်း ချော်တောငေါ့မိသွားပြန်ပီ ချောဒီး။ ဆက်ပြောမယ်။ တော်တော်ကြာတော့မှ အပျိုကြီးဖုတ်ဖုတ်နဲ့ သန်မြန်ဆဲချာတိတ်လေးရဲ့ဒုံးပျံဂဟေဆက်ထားတာကို ဆွဲချွတ်ပစ်ကြတယ်။
အ၀တ်တွေဘာတွေကို နေသားတကျဝတ်ပီးတော့မှ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ယောက်ဖက်တွယ်ထားရင်း တရုတ်စကားပင် ပင်စည်ကိုမှီပီးထိုင် ပြုံးချိုချိုမျက်နာပေးလေးတွေနဲ့ “မောင်မောင်မမချစ်မ၀”(အောဝတ္ထုနာမည်ဟီး) ဂိုက်ပေးလေးတွေနဲ့သာယာနေကြတာဗျ။ ရင်ထဲမှာလည်း ဘယ်လိုကြီးမှန်းကိုမသိတာ။ ပျော်နေကြတာပေါ့လေ။ ဘယ်လိုနေလဲဘာညာပေါ့။ အပြန်အလှန်ဗျူးနေကြတာ။ ၂ယောက်စလုံးက စိုးရိမ်နေတဲ့ပုံရယ်ဗျ။ သူများငါ့ကို ကျေနပ်ရဲ့လားဆိုတာမျိုး(တကယ်ချစ်တဲ့သူတွေက အဲ့လိုပဲထင်ပါရဲ့ဗျာ) ဆရာမလေး .. ဘယ်လိုနေလဲဟင် ကောင်းလားဗျ? ဟီး သိပူးလေ ငိုချင်သလိုရယ်ချင်သလိုကြီးရယ် မောတာဟာ.. ကိုဖိုးသက်လေးကော ဟောဟဲဟောဟဲဟောဟဲ ဖြစ်နေတာလေဟိ(ဟောဟဲဆိုတာကို လျှာလေးထုတ် ရင်ဘတ်လေးဖိပီးလုပ်ပြနေတယ် သေချင်းဆိုးမလေးဟားဟား) ဟားးး (စိတ်ယားလာလို့ ဟားကနဲအော်ရင်း အတင်းဆွဲဖက်ထားလိုက်မိတယ်)
ဆရာမလေးကကော ဘာထူးလို့လဲ အတင်းရုန်းပီးထထိုင်လာတာလေ အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟင်? လှပ်လှပ်လှပ်လှပ်ကြီးဟာ “အာကာတ” ထဲရောက်သွားတာလိုလိုကြီး (အာကာသလို့ပြောချင်တာ သူက “သ” သံမထွက်တတ်ဘူးအဟီး) အမယ် အာကာသ ထဲရောက်ဖူးသလိုလိုဟားဟား ကိုဖိုးသက်လေးနော်ဟွန်း (ကျနော့်လက်မောင်းကို ရှက်ပြုံးလေးပြုံးစိစိနဲ့ ထုလာတယ်) အရမ်းပျော်တာပဲဆရာမလေးရာ တူတူပဲ (ပြောရင်း ကျနော့် ရင်ခွင်ထဲ အတင်းတိုးဝင်လာတယ်) ကိုဖိုးသက်လေး ကျမ ရှင့်ကို ရှင်နဲ့တူနဲ့ စာတတ်ပေတတ်ဖဲသမားသေးသေးလေးမွေးပေးမယ်သိလားအဟိ ဟင့်အင်း မလိုချင်ပူး ဟမ်! ရှင်နော် ချို့ကို အပျော်ကြံတာလား ဒါဆို အု!! (စွာတာတာအသံလေးကို လက်ဖ၀ါးနဲ့လှမ်းပိတ်ပေးလိုက်တာ) ကျနော်က ဆံပင်နက်နက်ရှည်ရှည်လေးနဲ့ စွာတေးမလေးပဲလိုချင်တာ.. ပါးဖောင်းဖောင်း အသားဖြူဆွတ်ဆွတ်.. မျက်နာထားက မာမာ ကျနော့်ကိုပိတ်ပိတ်ဟောက်တဲ့.. ရူပဗေဒဆရာမသေးသေးလေး အဲ့ဒါမျိုးလေးရရင် သေပျော်ပါပီဗျာဟီး ဟေ့အေး! မရဘူးဟာ ဖဲသမားသေးသေးလေးပဲမွေးမယ် ရူပဗေဒဆရာမသေးသေးလေးပဲ ယူမယ် မရဘူး! ရဒလယ်! အဲ့လိုအချီအချငြင်းခုန်နေကြတုံးမှာပဲ ကျောင်းဆင်းတဲ့ သံချောင်းခေါက်သံကြားလိုက်ရတယ်။
ကျောင်းက မလှမ်းမကမ်းမှာကိုး။ သူ့တပည့်မလေးတွေပြန်လာတော့မယ်လေ။ ၂ယောက်သားအချစ်နလံထနေရာကနေ ကိုယ်ချင်းခွာလိုက်ရတယ်။ အမှန်ကတော့ ဘယ်ခွာချင်ကြပါ့မလဲဗျာ။ ပြန်ချင်ဘူးဆရာမလေးရာလို့ပြောတော့ ကျမလည်းရှင့်ကို ပြန်လွှတ်ချင်ဘူးရယ်လို့ မျက်နာငယ်လေးနဲ့ပြောရင်း.. ညဖက်ကြရင် တိတ်တိတ်လေး ဟိုးအရင်ကလို ပြန်လာခဲ့မလားတဲ့ အပြုံးချိုချိုလေးနဲ့ပြောလာတယ်။ ဟိုဒင်းလုပ်ရမှ လာမယ် လို့ပြန်ဖြေလိုက်တော့ ဟွန်း!! ဆိုပီး မျက်စောင်းက ထိုးလိုက်သေးတယ်ဟိ။ ပီးတော့မှ ရှင့်ကို ညဖက်ခေါ်ပါတယ်ဆိုမှ ဘာလုပ်ချင်တယ်ထင်လို့တုံးတဲ့.. အဲ့လိုပြောပီး ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ မျက်နာလွှဲထားတယ်။ ရှက်ဝဲ၀ဲဖြစ်နေတဲ့ မျက်နာလေးက ပန်းသွေးရောင်တောက်လို့ပေါ့ဗျာ။ ဒါပဲကွာ .. လစ်တော့ သူများမြင်ကုန်မယ် ချို ရေသွားချိုးတော့မယ် ပြန်တော့ လို့လှမ်းပြောပီး လှစ်ကနဲပြေးသွားတယ်။ ကျနော်လည်း ပွဲဦးထွက်မှာ ပိုလန်ကိုသိမ်းလိုက်နိုင်တဲ့ ဂျာမန်နှုတ်ခမ်းမွှေးကြီးရဲ့စတိုင်နဲ့ ရင်ကိုကော့ခေါင်းကိုမော့ပီး အိမ်ကိုသုတ်ချေတင်လာခဲ့တယ်(ဒူးတော့နည်းနည်းချောင်ချင်နေတယ်ဟီးဟီး) အိမ်ခဏပြန်ပီး မျက်နာပြအလုပ်တွေကူလုပ်လိုက်ဦးမယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ညဖက် ဆရာမလေးဆီပြန်သွားရင် တိုက်ပွဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရဦးမှာမလား။ စစ်ဦးဘီလူးဆိုတာကိုး။ အချစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က ခုမှစမှာလေဟဲဟဲ။
ကိုင်း! ညီအကိုတို့ သူများတွေကတော့ အပျိုရည်ပျက်ပျက်ချင်း ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြတယ်မသိဘူး။ ချိုကန်းတို့ ရူပဗေဒဆရာမလေးတို့တုံးကတော့ မနာမကျင်၊မကွဲမပြဲနဲ့ ကြည်နူးစရာဘယ်လိုကောင်းတယ်ဆိုတာလေး ဆက်ရေးပြပါဦးမယ်။
ကံထူးလို့ ဖျာပုံသူဖျာပုံသား များ နှင့် မြန်မာ တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ ဖူးချိန်တန် ဖူးထိုက်လို့.ဖူးမျှော်ခွင့်ရလို့ ထင်ပါပြီ။